प्रदीप बाँस्तोला बाट प्रियंका कार्की - साप्ताहिक
६ वर्षअघि टेलिश्रृंखला 'कलेज'बाट उदाएका प्रदीप बाँस्तोलाको त्यहीताका अर्को टेलिश्रृंखला 'घरबेटी बा'मा अभिनय गरिरहेकी प्रियंका कार्कीसँग मित्रता भयो । गायन एवं अभिनयमार्फत आफूलाई चिनाउने प्रयत्न गरिरहेका प्रदीपले त्यसपछि प्रियंका अभिनीत चलचित्र 'कलिउड'मा संगीत भरे भने केही म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरे । प्रियंका त्यसपछिका दिनहरूमा अति व्यस्त नायिका भैसकेकी छिन् । प्रदीपले प्रियंकासँग दुईवटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन् । हालै आफ्नै संगीत र गायनको रमाइलो गीत 'मुङ्फली'को म्युजिक भिडियोमा उनी प्रियंकासँग नाचेका छन् । चलचित्र 'अधकट्टी'बाट नायकका रूपमा उदाउने क्रममा रहेका प्रदीप र प्रियंका असल मित्र हुन् । प्रदीपले आफ्नी सेलिब्रेटी मित्र प्रियंका कार्कीका बारेमा यसरी कुरा काटेका छन् :
मित्रता राख्न जान्ने : उनले जो जतिसँग मित्रता गरेकी छिन्, मलाई लाग्छ कि कसैको पनि चित्त दुखाएकी छैनन् । मित्रता निर्वाह गर्न खप्पिस छिन् ।
मिठो आवाज : उनको स्वरमा एक प्रकारको मिठास छ । उनको आवाज अरूको भन्दा भिन्न लाग्छ ।
सकारात्मक सोच : जुनसुकै कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिने निकै असल स्वभावकी छिन् ।
कुशल नृत्याङ्गना : उनको नृत्यकलाको मैले के प्रशंसा गर्नु ? दुनियाँले नै प्रशंसा गरेपछि ।
असल अभिनेत्री : प्रियंका जति नृत्यमा उत्कृष्ठ छिन्, त्यति नै उनको अभिनय पनि स्वभाविक छ ।
फेसबुकमा खुलस्त : फेसबुकमा आफ्नो दैनिकीका बारेमा बताउनु र बढीभन्दा बढी तस्बिर अपलोड गर्नु पनि राम्रो हुँदैन कि ?
नाइँ भन्न नसक्ने : उनी कसैको कामका लागि पनि हरदम तयार हुन्छिन्, मनले नखाएको कामलाई नाइँपनि भन्न सक्नुपर्छ ।
सही र गलत नचिन्ने : उनी सही र खराब मित्रको पहिचान गर्न सक्दिनन् जस्तो लाग्छ । सबैलाई राम्रै देख्ने उनको बानीमा केही सुधार ल्याउनुपर्छ । संसारमा सबै मानिस असल हुँदैनन् ।
छनौट गलत : चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोमा काम गर्दा चुजी भएको राम्रो कि ?
धपेडी गर्ने : धेरै कामको जिम्मा लिएर स्वास्थ्यको ख्याल नराखी धपेडी गर्ने बानीले उनैलाई हानि पुग्नसक्छ ।
सुशान्त कार्की, नायक